Wararka Maanta: Khamiis, May 16, 2019-Muqdisho: Nin gaari qarax ku xirayey oo la qabtay, halka mid askari dhaawacay la toogtey
Ma jirto khasaaro dhimasho ama dhaawac oo ka dhashay qaraxa marka laga reebo in isla gaariga uu soo gaarey burbur xooggan, wallow aanan wali la ogayn shaqsiga iska leh baabuurka. Sida laga soo xigtay goobjoogayaal dad shacab ah ayaa wargeliyay ciidanka amniga xilliga gaariga lagu xirayay qaraxa waxaana markiiba goobta gaaray ciidanka amniga.
Ninka falkan lagu qabtay oo laamaha ammaanka ay wateen ayaa su'aallo lagu waydiinaya xarunta dambi baarista ,iyadoo la filayo in maxkamad la horkeeno, sida laga soo xigtay saraakiisha.
Docda kale, laamaha ammaanka ayaa waxay isgoyska Bakaaraha ku toogteen ruux dhaawacay askari ka tirsan booliska, balse waxaa baxsaday qof kale oo la socday ninka ay ciidanka amniga toogteen.
Warbaahinta dowladda ayaa ku warrantay ruuxa la toogtay inuu ka tirsanaa ururka al-Shabaab, xilligana lagu daba-jiro ruuxa kale ee baxsaday.
Falalkan ayaa ku soo aaddaya xilli ciidanka amniga feejignaan dheeraad ah la galiyay,iyadoo inta badan la soo dhoobey isgoysyada Muqdisho ciidammo dheerad ah oo ka tirsan booliska.